Warbixin:-Bil kadib Qaraxii Zoope, Maxay Bulshadu ka baratay ? – Radio Muqdisho
Warbixin:-Bil kadib Qaraxii Zoope, Maxay Bulshadu ka baratay ?
Qaraxii Zoobe oo maanta laga joogo muddo bil ah wuxuu ahaa musiibo qaran oo ku dhacday Umada soomaaliyeed, iyadoo dad kor u dhaafay 642 oo qof ay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaareen.qaraxa ayaa sidoo kale qasaara hantiyadeed oo aad u balaaran uu geystay , wuxuuna ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya.
Dhanka kale dhacdadan xanuunka badan waxay midaysay umadda soomaliyeed ,waxaan la arkayay dal iyo dibad soomalida meel kasta ay joogaanba inay si isku mid ah uga damqadeen iyagoo sameeyay dibad baxyo waawayn oo ay ku muujinayeen sida ay ugu xunyihiin dhibaatada soo gaartay walaalahooda.
Ugurmashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii isgoyska Zoobe ayaa ahayd mid dal iyo dibadba si weyn loogu istaagay, iyadoona dhaqaalo aad u fara badan laga soo ururiyay, shacabka soomaaliyeed, waxaa la arkayay dhallinyaro iskood isu abaabulay, si ay gurmad ay ugu fidiyaan walaalahooda ku waxyeeloobay masiibadaasi, Waxaana ay dhalinyaradan ka shaqeyneynayeen habeen iyo maalin caawinta dadka dhibta soo gaartay, sida dadka eheladooda ku waayay dhacdadan ka caawinayay sidii ay ugu xaqiijin lahaayeen nolol iyo geeri waxa ay ku suganyahiin, sidoo kale dhallinyaradau waxay qeyb libaax leh ka qaateen dib u soo celinta bilicda wadada Zoobe iyo kaalmeynta dhaawacyada isbitaalada ku jiray.
Madaxweynaha Soomaaliya md, Max’ed C/llaahi Farmaajo iyo raiisulwasaare Kheyre ayaa si aad ah u ammaanay doorka dhalinyarada Gurmad ka qaateen taakulaynta dadkii ku waxyeeloobay mashaqadii Zoope, Waxaana halkaasi laga dareemayay in dhalinyarada soomaaliyeed yihiin kuwa karti badan oo wax qabsan kara.
Hadaba si aan u ogaano sida ay tahay xaalada isgoyska Zoobe mudo bil ah kadib ayaan waxaan socdaal shaqo ku tagnay isgooska Soobe, waxaan halkaasi ka muuqanaya in ay dib u soo laabteen goobahii ganacsiga qaar ee uu qaraxu saameeyay, sidoo kale isgooska soobe ayaa waxaa uu la soo noqday mashquulkiisii waxaana xaalada ay hada tahay mid caadi ah.
Waxaan noo suurtagashay in aan halkaasi aan kula kulano qaar kamid ah ganacsatadii halkaasi goobaha ganasi ku lahaa iyo sidoo kale dadka isticmaalayay wadada waxaana wax ka weydiiyay dareenkooda bil ka dib qaraxii waxuush nimada ahaa ee kooxda nabadiidka ay ku xasuuqeen dadkii shacabka ah.
Waxaana muuqaneysa sida ay dadka soomaaliyeed uga go’antahay horumarka wadanka ka curtay inay sii wadaan oo aysan marnaba niyad jabin doonin qaraxyada, inkastoo qaraxii Zoobe uu ahaa musiibo qaran hadana shacabka soomaliyeed waa kuwa adkeysi badan.
Wali waxaa si isdaba joog ah dalka iyi dibaddaba uga socda gurmad ay bulshada Soomaaliyeed ugu soo gurmanayso dadkii dhibaatada ka soo gaartay dhibaatadii xanuunka badnayd ee wada saamaysay Quluubta Bulshada Soomaaliyeed, waxaana maanta dalka soo gaaray guddigii howlaha dhaqaale uruurinta ka waday dalka Kenya, iyadoo ay soo dhaweeyeen Wasiiro, Xildhibaano iyo Culimo ka mid ah guddiga Gurmadka Qaran ee Musiibadii Zoobe.
Ciidamada soo majeestayaasha xoogga dalka oo ka jawaabayo ficilka xun ee kooxda Argagixisada ayaa sii balaariyay dagaalada ay kaga sifeynayaan cadowga umadda Soomaaliyeed ee Al shabaab deegaanada ay kaga dhuumeeleysanayaan Dalka, iyagoo la wareegay deegaano Balaaran oo katirsan Gobolada Soomaaliya, waxeyna ku dileeen tiro badan oo ka tirsan kooxda Alshabaab.
Maanta oo ah Bil-guuradii ka soo wareegtay Masiibadii Qaran ee 14kii Octoobar, waxaa muuqata in Bulshada Soomaaliyeed ay ka baratay dhacdadaasi in iskaashi wadajir looga hortago kooxaha arxanlaawayaasha ah iyo in bulshadu ay isku tashato, si buuxdana loo garab istaago Ciidamada qaranka ee habeen iyo maalinba heeganka u ah in shacbiga ka xoreeyaan kooxda argagixisada.
Taliska Booliska Soomaaliyeed oo soo Bandhigay Sanaadiiq loogu tala galay Cabashada dadweynaha+Sawirro